ကိုဗဈပထမလှိုငျး နဲ့ ဒုတိယလှိုငျးဟာ နှိုငျးယှဉျလိုကျရငျ အဆ ၉၀ ကှာပါတယျ ဘယျလိုကွောငျ့ ပါလိမျ့ဆို ရှငျတမျး(အမြားသိအောငျ မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …) – Let Pan Daily
ကိုဗဈပထမလှိုငျး နဲ့ ဒုတိယလှိုငျးဟာ နှိုငျးယှဉျလိုကျရငျ အဆ ၉၀ ကှာပါတယျ ဘယျလိုကွောငျ့ ပါလိမျ့ဆို ရှငျတမျး(အမြားသိအောငျ မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …)
Let Pan | September 27, 2020 | Local News | No Comments
စာအရှညျကွီးရေးဖို့လဲ မအားတာ ကွောငျ့ လိုတိုရှငျး ရေးလိုကျ ပါတယျ. ကိုဗဈပထမလှိုငျးနဲ့ ဒုတိယလှိုငျးဟာ နှိုငျးယှဉျလိုကျ ရငျ အဆ ၉၀ ကှာပါတယျ. ဘယျလိုကွောငျ့ ပါလိမျ့ဆို ရှငျးပါ့မယျပထမလှိုငျးမှာ လူနာစတှသေ့ညျ့ မတျလ ၂၃ မှ လူနာ ၃၇၄ ယောကျဖွဈဖို့ ၂၁ ပတျကွာပါတယျ တဈပတျကို ၁၆ ယောကျနှုနျး ဖွဈပါတယျ.
သို့သျော ဒုတိယလှိုငျး စတငျသညျ့ လူနာ ၃၇၅ မှ ၉၉၉၁ ဖွဈဖို့ ၆ ပတျပဲကွာပါတယျ တဈပတျကို ၁,၆၀၃ ယောကျ ပိုးတှပေ့ါတယျ ဒါဆိုအဆ ၉၀ ကှာတာသိလောကျပွီထငျပါတယျထို့နညျးတူပထမလှိုငျးမှာ သသေူ ၆ ယောကျပဲရှိပမေဲ့ ဒုတိယလှိုငျးမှာ ယခုအခြိနျအထိသသေူ ၁၉၂ ယောကျ ရှိပါတယျ.
သသေူ စုစုပေါငျး ၁၉၈ ယောကျကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာ ကွညျ့လြှငျ ၆၀ အထကျ ၁၃၇ ယောကျရှိပွီး စုစုပေါငျးသဆေုံးသူ၏ ၆၉% ရှိနတောကို တှရေ့မှာပါ. အမြိုးသား သဆေုံးမှုက အမြားဆုံး ဖွဈပွီး ၁၂၈ ဦးရှိကာ ၆၅% ရှိ ပါတယျ အမြိုးသမီးသဆေုံးမှုက ၇၀ ဦးရှိပွီး ၃၅% ရှိပါတယျ. ကြားမ သဆေုံးမှုအခြိုး ၂:၁ ဖွဈပါတယျ.
စာအရှည်ကြီးရေးဖို့လဲ မအားတာ ကြောင့် လိုတိုရှင်း ရေးလိုက် ပါတယ်. ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းဟာ နှိုင်းယှဉ်လိုက် ရင် အဆ ၉၀ ကွာပါတယ်. ဘယ်လိုကြောင့် ပါလိမ့်ဆို ရှင်းပါ့မယ်ပထမလှိုင်းမှာ လူနာစတွေ့သည့် မတ်လ ၂၃ မှ လူနာ ၃၇၄ ယောက်ဖြစ်ဖို့ ၂၁ ပတ်ကြာပါတယ် တစ်ပတ်ကို ၁၆ ယောက်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်.
သို့သော် ဒုတိယလှိုင်း စတင်သည့် လူနာ ၃၇၅ မှ ၉၉၉၁ ဖြစ်ဖို့ ၆ ပတ်ပဲကြာပါတယ် တစ်ပတ်ကို ၁,၆၀၃ ယောက် ပိုးတွေ့ပါတယ် ဒါဆိုအဆ ၉၀ ကွာတာသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်ထို့နည်းတူပထမလှိုင်းမှာ သေသူ ၆ ယောက်ပဲရှိပေမဲ့ ဒုတိယလှိုင်းမှာ ယခုအချိန်အထိသေသူ ၁၉၂ ယောက် ရှိပါတယ်.
သေသူ စုစုပေါင်း ၁၉၈ ယောက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကြည့်လျှင် ၆၀ အထက် ၁၃၇ ယောက်ရှိပြီး စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ၏ ၆၉% ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ. အမျိုးသား သေဆုံးမှုက အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၁၂၈ ဦးရှိကာ ၆၅% ရှိ ပါတယ် အမျိုးသမီးသေဆုံးမှုက ၇၀ ဦးရှိပြီး ၃၅% ရှိပါတယ်. ကျားမ သေဆုံးမှုအချိုး ၂:၁ ဖြစ်ပါတယ်.
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အမေစုပုံပန်ချီကားတွင် ပါဝင်သော ဥုံဏ္ဏလုံး နှင့် ပတ်သက်ပီး ပန်ချီဆရာဖြေရှင်းပီ
COVID-19 ကူးစက် ခံနေရတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ရဲ့ နောက်ဆုံး ရ ကျန်းမာရေး အေခြအနေ
ဆေးရုံကြီး အတွင်း ၌ သရဏဂုံ အစွမ်းကြောင့် အသက်ရှင် ခဲ့ရသူ